स्थानीय करको मार | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय स्थानीय करको मार
on: August 02, 2018 सम्पादकीय
स्थानीय करको मार
वीरगञ्ज नगरपालिकाले मनोमानी ढङ्गले कर उठाएको भन्दै गत आइतवार वीरगञ्जका व्यापारी सडक आन्दोलनमा उत्रिए । उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा भएको उक्त आन्दोलनले वीरगञ्ज नगरपालिकामाथि मूल्याङ्कन र कर वृद्धि गरी जनताको आर्थिक शोषण गरेको आरोप लगाएको छ । नगरपालिकाले जग्गाको मूल्याङ्कन ९ गुणासम्म बढाएको छ भने पहिला खारेज भइसकेको कबाडी करसमेत उठाउन थालेको छ । यसका दुईओटा स्पष्ट कारण हुन सक्छन् । कि त राजनीतिक प्रतिनिधिले स्थानीय तहको कामका लागि स्रोत अपर्याप्त भएको बाध्यता, कि त लापरबाहीपूर्ण तरीकाले आफ्नो अख्तियार उपयोग । अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा सृजित विवादलाई हेर्दा भने यी तहले प्रामाणिक तर्कमा आधारित असल सार्वजनिक नीतिको भरमा नभएर लापरबाह नीतिको आधारमा कर उठाउने गरेको देखिएको छ । आफूले उठाएको करको समाज र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने अध्ययन नगरी राजस्व बढाउनुपर्ने बाध्यता मात्र हेरेर स्थानीय तहले नीतिगत निर्णय लिने गरेको देखिएको छ ।
वीरगञ्ज नगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगी आफै व्यापारिक घरानामा जन्मिएका उद्योगी व्यवसायी हुन् । २०६३ सालमै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष बनेका सरावगी पछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि बने । त्यसैले उनलाई उद्योगी तथा व्यापारीको समस्या राम्रोसित थाहा छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि वीरगञ्जको मेयर बनिसकेपछि किन उनले उद्योग व्यवसायी तथा व्यापारीलाई ‘जथाभावी’ करको मारमा पारेर सडकमा ओर्लन बाध्य पारे त ? मूल्याङ्कन र कर बढाउनु उनको बाध्यता थियो या उनी साँच्चीकै परिवर्तन भएर उद्योगीको मर्म बुझ्न नसक्ने बनेका हुन् ? उद्योगी व्यापारी साधारणतया आन्दोलनमा सहभागी हुने या सडकमै ओर्लिने गर्दैनन् । स्थानीय तहको निर्णयले उद्योगी व्यापारी मात्र होइन, वास्तवमा स्थानीय जनता नै मारमा परेका हुन् । एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा सामान ढुवानी गर्दासमेत कर लगाएका समाचार प्रकाशित भएका छन् । पहिलापहिला यसैगरी हरेक जिल्ला वा नगरले जथाभावी चुँगी कर उठाउने गर्थे । त्यस अभ्यासको चारैतिर विरोध भएपछि सरकारले चुँगीकर लगाउन नपाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसैगरी कबाडी कर उठाउन पनि बन्द गर्‍यो । अब त्यही चुँगीकर र कबाडी करको पुनरावृत्ति हुनु भनेको ‘प्रतिगमन’ नै हो ।
वीरगञ्ज नगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगी आफै व्यापारिक घरानामा जन्मिएका उद्योगी व्यवसायी हुन् ।
अहिले स्थानीय तथा प्रदेश सरकार स्वायत्त छन् र आफ्नो अधिकारको क्षेत्रमा कर लगाउन पाउँछन् । त्यसैले केन्द्रले सीधै स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन पाउँछन् । कानूनले तोकेको स्रोतबाट बाहेक अन्य स्रोतबाट स्थानीय तहले कर लगाउन वा ऋण लिन पाउँदैन । तर, अधिकार क्षेत्रभित्रै करको दायरा बढाउँदा पनि स्थानीय तह विवादमा तानिने गरेका छन् । अधिकार छ भन्दैमा त्यसको जथाभावी उपयोग गर्न हुँदैन । यसै गरी स्थानीय तहमा करको विवाद बढ्दै जाने हो भने यसले देशव्यापी रूपमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो काम गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । बाध्यतावश होस् वा लापरबाहीका कारण जथाभावी कर लगाइएको होस्, स्थानीय तहहरूलाई सार्वजनिक वित्तसम्बन्धी अभिमुखीकरणको आवश्यकता छ । तर, चुनौती के छ भने जानाजान यस्तो निर्णय गर्ने स्थानीय तहहरूलाई अभिमुखीकरण गर्न सकिँदैन । त्यसैले नयाँ सृजित द्वन्द्वहरूको समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात विवाद समाधान गर्ने तहहरूमार्फत समाधान खोजिनुपर्छ । कि त लामो समयको उतारचढाव, आन्दोलन र वार्तापछि निस्कने समीकरणलाई नै समाधान मान्नुपर्ने हुन्छ । यो दोस्रो विकल्पका लागि धेरै नै समय खर्चनुपर्ने हुन्छ । आजको राजनीतिक अवस्थामा नेपाललाई यति धेरै समय छैन । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर प्रामाणिक तथ्य र तर्कका आधारमा सार्वजनिक नीतिको अभ्यास गर्नु अपरिहार्य बनेको छ ।